सिक्किममा कोरोनाबाट थप एकजनाको मृत्यु: कुल संख्या चार पुग्यो - The Sikkim Chronicle
गान्तोक, 31 अगस्त: सिक्किममा कोभिड-19 संक्रमणबाट चौथो मृत्यु भएको समाचार अघि आएको छ। राज्यका आइईसी अधिकारी सोनाम जी भुटियाले आजको हेल्थ बुलेटिन मार्फत सो जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन्। पूर्व सिक्किम सिङताम चिसोपानी निवासी 50 वर्षीय पुरुषलाई सिङताम जिल्ला अस्पतालबाट गान्तोकको एसटीएनएम अस्पताल रेफर गरिएको थियो। तिनलाई मिर्गौला अनि लिभर सिरोसिसको समस्या रहेको थियो। तिनको कोभिड […] The post सिक्किममा कोरोनाबाट थप एकजनाको मृत्यु: कुल संख्या चार पुग्यो appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.
Aug 31, 2020 - 13:18
गान्तोक, 31 अगस्त: सिक्किममा कोभिड-19 संक्रमणबाट चौथो मृत्यु भएको समाचार अघि आएको छ। राज्यका आइईसी अधिकारी सोनाम जी भुटियाले आजको हेल्थ बुलेटिन मार्फत सो जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन्।
पूर्व सिक्किम सिङताम चिसोपानी निवासी 50 वर्षीय पुरुषलाई सिङताम जिल्ला अस्पतालबाट गान्तोकको एसटीएनएम अस्पताल रेफर गरिएको थियो। तिनलाई मिर्गौला अनि लिभर सिरोसिसको समस्या रहेको थियो। तिनको कोभिड जाचँ गर्दा संक्रमण पनि देखा परेको बताइएको छ।
तिनका रिपोर्ट अनुसार तिनलाई फोक्सोको भने कुनै समस्या नरहेको भनिएको छ। मृत्यु अघि तिनमा संक्रमण पाइयो, यसैले तिनको मृत्यु कोभिड-19को कारण भएको हो भनी खबर सार्वजनिक गरेको अधिकारी भुटियाले बताए।
सिक्किममा आज 25वटा नयाँ मामला अघि आएसँगै अब कुल पोजिटिभ 1652 भएका छन् भने 1225जना निको भइसकेका छन्। कोभिडबाट मृत्यु भएको संख्या आजबाट4पुगेको छ। समाचार लेखुन्जेलसम्म राज्यमा सक्रिय मामला 424 रहेको छ।
The post सिक्किममा कोरोनाबाट थप एकजनाको मृत्यु: कुल संख्या चार पुग्यो appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.
Bimal Thapa Nov 20, 202002878
Bimal Thapa Jul 17, 20200694
SC Desk Jun 18, 20200693
admin Jun 21, 20200550
Bimal Thapa Oct 16, 20200747
Bimal Thapa Oct 13, 20200707
SC Desk Feb 2, 20200694
admin Oct 8, 20200695
SC Bureau Nov 17, 202001195